IKhethindlelenhle ibuye nesitifiketi kowe-Eco Schools | Eyethu News
IKhethindlelenhle ibuye nesitifiketi kowe-Eco Schools
“Basakhala ngenselelo yesomiso ababhekene nayo.”
ISIKOLE samabanga aphansi iKhethindlelenhle Primary sizuze i- International flag kanye ne- Platinum certificate kuhlelo olwethulwa yi- Wildlife and Environment Society of South Africa (WESSA) ezikoleni olubizwa nge-Eco schools obelusesikoleni samabanga aphansi i Laddsworth primary eHilton.
Loluhlelo lomhlaba lwenhlangano engenzi insuzo iFoundation for Environmental Education (FEE) olwasungulelwa ukweseka izifundo zemvelo ezikoleni. UNksz Nonhlanhla Buthelezi onguthisha aphinde abengumqondisi we-Enviro club kulesikole uthe othisha baba nezihloko ezinhlanu ezizohambelana nohlelo okungaba esezingadi noma ngese-recycling.
“Saqala ngeyodwa saze sawaqeda wonke sase sithola i- International flag kanye ne- Platinum certificate. Ukuhlomula ngalezinto kusho lukhulu kuthina kanye nabafundi, kulonyaka zibeningi izingane ezingenele i- Enviro club ngenxa yokubona izinhlelo ezenziwayo njengamanje sikezinhlelweni zokubafaka ezingadini,” kuchaza uNksz Buthelezi.
Uqhube wathi izinselelo ababhekane nazo eyesomiso wathi kuphazamise uhlelo lwabo kanti enye ngeyezimbuzi ezingenayo engadini. “ Siyanxusa kunoma wubani asixhase ngocingo, amathangi ka-Jojo kanye nezinsiza zokusebenza ziyashoda kanti abafundi baningi, kusho uNksz Buthelezi.
UNksz Phumla Mbanjwa (12) ongumfundi uthe uyakuthanda kakhulu ukuba yingxenye ye- Enviro club ngoba uma betshala kuningi abakufundayo sithola ukudla kanti futhi kwenza umhlaba ubukeke kahle sithole nomoyaohlanzekile.
Ibamba likamphathi wesikole uMnu Thami Nxumalo uthe lokhu okwehlele lesikole kubaphatha kahle kakhulu bayabona ukuthi baningi abazimisele ngenqubekela phambili. “Baningi abafuna ukuthuthukisa isikole abathanda ukufaka igxalaba kuyiwe phambili. Isiphelile indaba yokuyekelela izinto kwabathile wonke umuntu usebaneqhaza alibambayo ekuthuthukiseni isikole,” kubeka uMnu Nxumalo.
UMasipala awuqashe onogada ngokugcwele – Hlabe